Allgedo.com » Dagaal qaraar oo mar dhow ka bilowday deegaano u dhow degmada Dheeka-Suftu
Print here| By: allgedo.com: Tuesday, February 14, 2017 // u Jawaab
War deg-deg ah oo hadda naga soo gaaray degmada Dheeka-Suftu ee gobolka Liibaan ee dhulka Ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa waxuu sheegayaa in subaxnmadii hore ee saaka oo Talaado ah ey maleeshiyaad huwan ah oo ah kuwa Oromada ey saddex jiho kasoo weerareen degmada Dheeka.
Deegaanada ey maleeshiyada Oromada weerarka qaawan ee gardarada ah kusoo qaadeen ayaa waxay kala yihiin: Agagaarka Buunda Qarab-qarab oo u dhaxeysa Nageyle iyo Dheeka-Suftu, deegaanka Dhuungo oo degmada kaga began Koofur galbeed iyo Qansax dheere oo ayana Koofur galbeed kaga began degmada.
Goobjooge ku sugan aagga uu dagaalka ka socda oo ka gaabsaday in uu magaciisa sheego ayaa waxuu AOL u xaqiijiyay in uu dagaalku u dhaxeeyo qowmiyadaha Oromada iyo kuwa Soomaalida.
Dagaalkii saaka bilowday ayaa la sheegayaa in Oromada dhowr goobood oo la’isku fara saaray looga gacan sareyo si weyna loogu jabiyay, ayada oo aanan ilaa iyo haddana la ogeyn inta uu la eg yahay qasaaraha labada dhinac soo kala gaaray inta uu la eg yahay.
Waxii war ah ee kusoo kordha dagaalka kasoo cusboonaaday deegaanada degmada Dheeka dib Ayaan idinkala soo socodsiin doonaa.
Cabdi Cusmaan (Kebede), Dheka-Suftu/Gobolka Liibaan.